Akhriso:- Tobanka Qodon Ee Ugu Cul-culus Buuga Laga Qoray Madaxwayne Trupm. | Awdalmedia.com
Akhriso:- Tobanka Qodon Ee Ugu Cul-culus Buuga Laga Qoray Madaxwayne Trupm.
Wariyaha lagu magacaabo Michael Wolff ayaa qoray buug lagu magacaabo Fire and Fury "Dab iyo Carro", wuxuuna sidoo kale buugga shaacinayaa in gabadha Trump Ivanka ay leedahay damac siyaasadeed oo ah in ay Maraykanka ka noqoto madaxweyne.
Buugga ayaa waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixinayaa xiriirka Trump iyo mulkiilaha shirkadda warbaahinta weyn ee Rupert Murdock.
Xogta buugga ku jirta waxaa lagu saleeyay wareysiyo laga qaaday illaa 200 qof, balse afhayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in buugga ay ka buuxaan macluumaad la marin habaabiyay oo been ah.
Halkan waxaan kusoo koobaynaa 10 sheey oo ugu wanaagsan oo buugga lagu sheegay.
1.Aragtida Banon ee wiilka madaxweynaha
Sida buugga lagu sheegay, ninkii Trump u qaabilsanaa dajinta qorshayaasha istaraatiijiga ah Steve Banon ayaa qabay fikir ah in kulanka dhexmaray wiilka Trump iyo koox Ruushka ka socota uu ka dhignaa qiyaano qaran.
Kooxda Ruushka ah ayaa Trump Jr u balanqaaday in ay siinayaan xog ku saabsan Hillary Clinton, taas oo fadeexad ku noqon karta iyada, islamarkaasna caawin karta ololaha doorashada aabihiis.
Banon ayaa wariyaha buugga qoray u sheegay in ay ahayd in markiiba loo yeero FBI-da si loogu dacweeyo kulanka sharci darada ah ee dhacay.
Waxa uu intaas ku daray in baaritaanka wasaaradda caddaalada ee xiriirka ka dhaxeeya Trump iyo Ruushka diirada lagu saari doono lacago si sharci darro ah la'is weeydaarsaday.
Wariyaha BBC-da Anthony Zurcher ayaa sheegaya in hadalka cusub ee Banon kasoo baxay uu ka dhiganyahaya sidii bam weyn oo ku qarxay Aqalka Cad oo intii muddo ahba aanan wax weyn kasoo qaadi jirin baaritaanka socda.
Waxa uu wariyaha intaas ku daray in Banon uu wax ka sheegay qoyska Trump ay iyaduna taas ka dhigantahay weerar qaawan oo madaxweynaha ku wajahan.
2.Trump oo aad ula yaabay guushii uu doorashada ka gaaray
Maqaal uu wariyaha buugga qoray ku daabacay wargeys ayuu ku sheegay in Trump iyo kooxdiisa ay aad ula yaabeen guusha ay ka gaareen doorashada madaxweynenimo.
Waxa uu sheegay in Trump uu la ashqaraaray guusha, isaga oo sidoo kale ka naxay sidii isaga oo arkay reer aakhiraad.
Arrintan waxa ay aad uga duwantahay waxyaabihii ay sheegayeen kooxda Trump illaa habeenkii natiijada lagu dhawaaqay.
3.Trump oo ka xanaaqay xafladdii caleemo saarka
Buugga ayaa waxaa lagu qoray in Trump uu aad uga xanaaqay xafladdii caleemo-saarka, maadaamaa dad caan ah ay go'aansadeen in aysan kasoo qeybgalin.
Waxa kale oo la sheegay in maalintii oo dhan uu xaaskiisa la dagaashanaa, islamarkaasna wajigiisa ay ka muuqatay carro iyo murugo.
4.Trump oo ka baqanayay Aqalka Cad
Buugga ayaa lagu sheegay in Trump uu ka baqanayay Aqalka Cad, islamarkaasna uu u arkay meel lagu wareero, isaga oo codsaday in quful dheeraad ah lagu rakibo qolka uu madaxweynaha seexdo.
Ciidammada sirdoonka ee madaxweynaha illaaliya ayaa ku adkaystay in ay qasab tahay in ay markasta gali karaan qolka madaxweynaha, islamarkaasna uusan kaligiis hoosta isaga xiri karin.
Trump oo ah nin taajir ah oo wax kasta oo uu damco jecel in uu helo, ayaysan layaab ahayn in Aqalka Cad markii uu tagay uu doonayay in uu waxyaabo badan ka badelo, sida in uu qofkiisa fadhiga soo dhigtay labo dhalo TV ah oo dheeraad ka ah tii horay usii tiilay.
5.Gabadha madaxweynaha oo doonaysay in ay madaxweyne noqoto
Waxaa buugga lagu sheegay in gabadha Trump ee Ivanka iyo ninkeeda Jared Kushner ay ku heshiiyeen in ay madaxweynenimo isu sharaxdo haddii ay fursadaas soo baxdo mustaqbalka.
Lamaanahan ayaa ka shaqeeya Aqalka Cad, go'aanadana waxa ay u gaaraan si wada jir ah, waxaana lagu naaneesaa Jarvanka oo ah isku darka labadooda magac.
6.Ivanka oo ku maadaysatay timaha aabaheed
Gabadha uu dhalay madaxweynaha Ivanka Trump ayaa la sheegay in si joogto ah ay ugu shartireysato timaha aabaheed, waxayna sheegtay in lagu talaalay madaxiisa.
"Trump ayaa tintiisa aad ugu qanacsan, waxayna ka midtahay waxyaabaha loogu hadal heyn badnaa.
7.Aqalka Cad oo aanan fahamsanayn kala horeynta muhiimadaha
Gabadha lagu magacaabo Katie Walsh oo ah ku xigeenka agaasimaha Aqalka ayaa weeydiisay la taliyaha madaxweynaha Jared Kushner waxa ay yihiin muhiimadaha koowaad ee maamulka Trump uu doonayo in uu xaqiijiyo ama qabto.
Balse sida buugga lagu qoray, Kushner kama uusan jawaabin arrintaas.
Waxa ay arrintan shaaca usoo bixisay in Trump uusan lahayn wax muhiimado cadcad ah oo uu maamulkiisa hiigsan karo.
8.Trump oo la dhacsan Murdoch
Wariye Wolff oo horey buug uga qoray Rupert Murdoch ayaa buuggiisa cusub ku sheegay in madaxweyne Trump uu aad ula dhacsanyahay Murdoch.
Waxa uu buugga kaga sheekeeyay kulan labada nin dhexmaray wax yar ka hor intii uusan xafiiska la wareegin Trump, waxaana xitaa dhacday in uu balantii kasoo daahay Murdoch, balse Trump uu sugay, dadkii kalena ku qasbay in ay sugaan si ay ula kulmaan.
Balse horey labada nin waxa u dhexmaray dagaal culus xiligii lagu jiray ololihii doorashada.
9.Murdoch oo Trump ku tilmaamay 'doqon'
Balse sida buugga lagu sheegay, Murdoch ayaa Trump ka haystay fikir xun, wuxuuna ku tilmaamay in uu doqon yahay.
Murdock waxa uu leeyahay taleefishinka caanka ah ee Fox News.
La taliyihii hore ee amniga ee Trump Mike Flynn ayaa la sheegay in uu ka warhayay in ay dhib weyn u keeni doonto in uu lacag ka aqbalay Ruushka.
Waxaa buugga lagu sheegay in Flyn uu $45 kun ka qaatay Ruushka.
Flynn ayaa ka mid ah dadka lagu soo oogay dacwadaha la xiriira in ay Ruushka la yeesheen xiriir aanan haboonayn